भाग्य / दिल साहनी | Online Sahitya
भाग्य / दिल साहनी
पत्रपत्रिकामा आलिसान महल बनाउने व्यक्तिको सूचीमा कमरेड किशोरको नाम पनि थियो । कमरेड मोहनले यसलाई अचम्भको घटनाको रूपमा लिएका थिए र स्वाभाविक घटनाको रूपमा पनि । अचम्भको घटना यस अर्थमा कि उनले कहिले सपनामा पनि सोचेका थिएनन् कमरेड किशोर यसरी सुकुम्बासीबाट महलवासी हुन पुग्लान् तर यथार्थ यही थियो । सत्य यही थियो ।
कमरेड मोहनले कमरेड किशोरसित एकसाथ राजनीति सुरु गरेका हुन् भन्दा पनि हुन्छ । त्यतिबेला दुवै जना बनारसमा शास्त्री पढ्दथे । दुवै जना पुष्पलालको सम्पर्कमा आए । उनका राजनीतिक क्लास लिए । उनीहरूलाई कालिदासको शकुन्तला र मेघदूतभन्दा पुष्पलालको राजनीतिक व्याख्यान राम्रो लाग्यो । प्रभावकारी लाग्यो । कालिदासको शकुन्तला र मेघदूत पढ्दा उनीहरूलाई कताकता हराएकोजस्तो लाग्दथ्यो । कताकता जङ्गली युगमा पुगेजस्तो पनि लाग्दथ्यो । कताकता तिलस्मी दुनियाँमा हराएकोजस्तो पनि लाग्दथ्यो तर जब उनीहरूले पुष्पलालको राजनीतिक व्याख्या र विश्लेषण सुन्दथे उनीहरूलाई आफ्नै इतिहास पढेजस्तो लाग्दथ्यो । आफ्नै कथा पढेजस्तो लाग्दथ्यो । कति बेला त उनीहरूलाई शास्त्रीको किताबहरू बनारसको कुनै एउटा गल्लीमा मिल्काएर झोला बोकी नेपालमा तुरुन्त क्रान्ति गर्न जाउँजस्तो पनि लाग्दथ्यो । बन्दुक बोकौाजस्तो पनि लाग्दथ्यो ।
त्यतिबेला नै वी.पी. कोइराला पनि नेपालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न भनेर बनारसमा नै पुगेका थिए । उनले सारनाथलाई क्रान्तिको हेडक्वाटरजस्तो बनाएका थिए । वी.पी. कोइरालाको नेपालमा सशस्त्र क्रान्ति गर्ने कुरोले पनि कमरेड किशोर र मोहनलाई थप प्रभाव पारेको थियो । उनीहरूमा जागेको क्रान्तिकारी भावनालाई थप ऊर्जा दिएको थियो ।
त्यतिबेला नै नक्सलवादी आन्दोलनको प्रभावमा नेपालमा झापा विद्रोह भएको थियो । झापालीहरूले सामन्तका टाउका गिाडेर नेपालमा नौलो जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने उद्घोषण गरेका छन् भन्ने कुराको चर्चा बनारसका गल्लीगल्लीमा पनि हुन थालेको थियो । बनारसका पसल पसलमा पनि हुन थालेको थियो । झापा विद्रोहको आवाज सुनेर बनारसमा अध्ययन गरिरहेका कैयौा युवकहरू नेपाल फर्किने मनस्थितिमा पुगेका थिए । झापा विद्रोहको प्रभावमा परेर कति युवकहरूले पुष्पलालले अब नेपालमा क्रान्ति गर्दैनन् भन्न थालेका थिए । यही अवस्थामा कमरेड मोहनविक्रमका गद्दार पुष्पलाल निस्क्यो । गद्दार पुष्पलाल लेखेकोमा कतिले मोहनविक्रमको कडा आलोचना गरे । कतिले भने मोहनविक्रमको गद्दार पुष्पलाललाई राम्रै पुस्तक माने ।
बनारसमा शास्त्री पढ्न बसेका किशोर र मोहनलाई हरेक घटनाले असर पारिरहेको स्थिति थियो । उनीहरूलाई हरेक घटनाले सकारात्मक प्रभाव पनि पारेको थियो । नकारात्मक प्रभाव पनि ।
पुष्पलालले नेपालमा क्रान्ति गर्दैनन् कमरेड । क्रान्ति गर्ने भनेको झापालीहरूले नै हो । पुष्पलाललाई मोहनविक्रम पनि संशोधनवादी भन्छन् । झापालीहरूले पनि संशोधनवादी भन्छन् । पुष्पलाल पक्कै संशोधनवादी रहेछन् । संशोधनवादीहरूले कहिले क्रान्ति गर्न सक्दैनन् । हामीले कि पुष्पलालबाट विद्रोह गरेर अर्को छुट्टै क्रान्तिकारी पार्टी बनाउनुपर्दछ कि नेपाल गएर झापाली हुनुपर्दछ । बन्दुक बोक्न पर्दछ । दूध विनायकको एउटा चिया पसलमा बसेर गद्दार पुप्पलाल लेखेको पुस्तकका पाना पल्टाउँदै कमरेड किशोरले निकै जोसिादै भने ।
कमरेडका कुरा मैले गलत मान्दिन तर म अहिले न पुष्पलाललाई छोड्ने मनस्थितिमा छु न त नेपालमा गएर बन्दुक नै बोक्ने अवस्थामा । चिया पसलमा राखेको दैनिक जागरण पल्टाउँदै भने मोहनले ।
मनमा क्रान्तिको ज्वाला उठेपछि त्यो शान्त हुन सक्दोरहेनछ । कसैको मनमा एक किसिमले क्रान्तिको भूत चढेपछि त्यो त्यत्तिकै चुपचाप बस्न सक्दोरहेनछ । सायद यही भएर पनि होला कमरेड किशोर एक सााझ बनारसबाट रेल चढेर नेपालको साइत गरे ।
नेपाल पुग्नेबित्तिकै उनको सम्पर्क झापालीहरूको राजनीतिक सङ्गठन कोकेसित हुन पुग्यो । पछि कोके हुँदै उनी माले हुन पुगे । त्यतिबेला भूमिगत पार्टीको रूपमा क्रियाशील नेकपा मालेको नेता मात्र होइन कार्यकर्ता हुनु पनि निकै धैरै गौरवका कुरा थियो । त्यतिबेला कति मान्छेहरू भन्ने गर्दथे नेपालमा यदि कसैले क्रान्ति गर्छ भने त्यो माले पार्टीले गर्दछ । झापालीहरूले नै गर्दछन् । अरूले त क्रान्तिका कुरा गर्ने मात्र छन् । क्रान्ति गर्ने रहर गर्ने मात्र हो ।
भूमिगत रहेर दिन रात पार्टीको काम गर्ने क्रममा कमरेड किशोरले आफ््नो विवाह गर्न पनि बिर्सेका थिए । आफ्नो घर परिवार पनि बिर्सेका थिए
केही वर्षपछि पार्टीकै पहलमा उनको विवाह कमरेड मालतीसित भएको थियो । उनीहरू कम्युनिस्ट पार्टीको झण्डामुनि उभिएर माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओत्से तुङ्ग विचारलाई आफ्नो सैद्धान्तिक आधार मानी नेपालमा नौलो जनवादी क्रान्ति सफल पारेर समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्ने आफ्नो लक्ष्यको लागि समर्पित हुने प्रण गर्दै विवाह बन्धनमा बाँधिएका थिए ।
कमरेड मनमोहनको माक्र्सवादीसित एकीकरण भएपछि माले अब माले रहेन । यो एमाले भयो । कमरेड किशोर र कमरेड मालती पनि आˆनो पार्टीसित नै एमाले हुन पुगे । यस अवस्थामा उनीहरू माले भइरहने कुरो भएन । यो कुरा बेग्लै हो कि उनीहरूलाई एमालेको राजनीतिक लाइन मन परेको थिएन । पुष्पलाललाई गद्दार भनेर झापाली राजनीतिमा लागेका कमरेड किशोरलाई हिजो राजावादी भनेर चिनिएका मनमोहनको नेतृत्वमा काम गर्न मन त पटक्कै लागेको थिएन तर एमालेजस्तो सबभन्दा ठूलो पार्टी छोडेर उनलाई सय पचास कमरेडहरूको पछि दगुर्न पनि मन लागेन । उनलाई आफू क्रियाशील रहेको पार्टीले अब नेपालमा क्रान्ति गर्दैन भन्ने कुरामा त कुनै शङ्का रहेको थिएन तर पनि उनले नेपालमा क्रान्ति नै गर्ने कुनै अर्को पार्टी पनि देखेका थिएनन् ।
यसैबीच एमालेको नौ महिने सरकार पनि बन्यो । यसै बेला कोही मन्त्री बने । कोही राजदूत बने । कोही जी एम बने । कमरेड किशोर र कमरेड मालतीले भने कुनै राजनीतिक नियुक्ति पाएनन् । उनीहरूलाई लागिरहेको थियो उनीहरू पार्टीको माथिल्लो नेतृत्वदायी पदमा नभएको हुनाले मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको पद नपाए पनि जी एमसम्म त बनाइनुपर्ने । उनीहरूले के पनि सोाचे भने पार्टीका सामन्य समर्थकहरू पनि ठूला ठूला डिग्रीधारी बुद्धिजीवी भएको कारण राजदूत बनाइए । जी एम बनाइए तर क्रान्तिको लागि बुर्जुवा डिग्री बहिस्कार गरेर आएको व्यक्तिको भने कुनै पनि मूल्याङ्कन भएन । उसलाई कुनै पनि ठाउँ दिइएन ।
पार्टीले कमरेड किशोर र कमरेड मालतीको कुनै मूल्याङ्कन नगरे पनि उनीहरूले पार्टीको नेतृत्व पंक्तिको राम्रै मूल्याङ्कन गरेका थिए । उनीहरूले देखिरहेको थिए हिजो रबरको सस्ता चप्पल लतार्दै हिाड्ने सर्वहारा कमरेडहरू यतिबेला पजेरो चढ्ने भइसकेका थिए । हिजो झुपडीमा बस्ने कमरेडहरू आज राजधानीमा नै महल बनाएर बस्ने भइसकेका थिए । हिजो कमरेडहरूले गद्दार भनेका पुष्पलालले बनारसमा पेटभरि पाउरोटी पनि खान पाउने थिएनन् तर नेपालमा क्रान्ति गर्न झापा विद्रोह सुरु गरेका कमरेडहरूका महलका कुकुरहरूलाई पनि मासुभात रुच्दैनथ्यो ।
पार्टीका नेतृत्व तहमा बसेका कमरेडका छोराछोरीहरू धमाधम विदेशमा डाक्टर, इन्जिनियर बन्न अमेरिका, बेलायत, रुस, चीन, जापान कताकता पुगेका थिए तर कमरेड किशोर र कमरेड मालतीलाई आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सरकारी स्कुलमा पढाउन पनि गाह्रो भइसकेको स्थिति थियो । उनीहरूले के पनि देखे भने केही नहुनेहरूले पनि मलेसिया, दुवै, कतार, कोरिया, जापान आदि ठाउँमा पुगी प्रशस्त पैसा कमाएर काठमाडौामा घर घडेरी किनेका थिए तर विडम्बना न त कमरेड किशोर र कमरेड मालतीहरू पार्टीमा रहेर कुनै प्रगति गर्न सकेका थिए न विदेश लागेर नै । पार्टीकै पहलमा सञ्चालित एन.जी.ओ. आई.एन.जी.ओ.कामार्फत पनि कति कमरेडले आफ्नो सात पुस्ता सपारेको देखेका थिए । यो पनि उनीहरूको व्यापक असन्तुष्टिको कारण बनेको थियो ।
यस्तै अवस्थामा एक दिन कमरेड किशोर र कमरेड मालतीले आफ्नो पार्टी नेतृत्वसित आफ्ना सारा गुनासा राख्दै भने- हामी अब होल टाइमरको रूपमा पार्टीमा रहेर काम गर्न सक्दैनांै । हामी कुनै पेशा अपनाउँछौा र आफ्नो घर पनि हेर्दै सक्दो पार्टीको काम पनि गर्दछौा ।
दुवै जनाले यही कुरालाई दृढतापूर्वक राखेको हुनाले पार्टीले हुन्न भन्ने स्थिति आएन । उनीहरू आफूले चाहेअनुसार नै विविध पेशा गरेर पार्टी काम गर्न सक्ने भए ।
आफ्नो पार्टी सरकारमा भएको बेलामा कमरेड किशोरहरूको नाममा पनि सुकुम्बासीमा एउटा घडेरी दर्ता भएको थियो । उनीहरूले त्यही घडेरीमा एउटा छाप्रो हालेर आफ्नो गार्हस्थ जीवन सुरु गरे । कुरा त पैतृक सम्पत्तिमा दाबी गर्ने पनि उठेको थियो तर उनीहरूले पहाडमा आफ्ना दाजु भाइहरूले कोरेर खाएको एक टुक्रा जमिनमा दाबी गरेर उनीहरूलाई पनि किन सुकुम्बासीमा झार्ने भन्ने सोचले कुरा अघि बढाएनन् । उनले एकपछि अर्को गर्दै थुप्रै पेशामा हात हाले तर कतै पनि सफल हुने स्थिति देखा परेन । किराना पसल राखे । त्यो उधारोले सुक्यो । होटल राखे त्यसमा पनि उनीहरूले खासै प्रगति गर्न सकेनन् । रक्सी नराखे होटल नचल्ने । रक्सी राखे त्यसकै कारणले होटलमा नै दिनरात मारपिट भइरहने । केही समय उनले ठेक्कापट्टामा पनि मन दिए तर नेपालमा ठेक्का पट्टा गर्दा मनी र मसल दुवै चाहिने रहेछ भन्ने कुराको चेत भएपछि उनले छोडे ।
केही समय उनले उद्योग चलाउने जमर्को पनि गरे । ढाका उत्पादन गर्न तान राखे । उनको यस पेशाले पनि रोजगारी चल्न गाह्रो पर्‍यो । कामदारलाई महिना मर्नसाथ पैसा दिन पर्ने । आफू त नाङ्गाको नाङ्गै । भोकाको भोकै । फेरि उनीहरूले होजियारी राखे । यो पनि अन्ततः उनीहरूको लागि फलिफाप भएन । त्यसलाई बन्द गरेर केही समय फर्निचर उद्योग पनि खोले । यसमा बढी चोरीका काठ चल्ने । यो पेशा उनीहरूको निम्ति उपयुक्त नभएको कारणले मात्र होइन कम्पिटिसनमा आउन नसकेको कारणले यसबाट पनि हात धोएका थिए । केही समय कमरेड किशोर र कमरेड मालतीले पत्रकारिता पनि नगरेका होइनन् तर पत्रकारितामा आवश्यक गुण आफूमा नभएको हुनाले यसमा पनि उनीहरू धेरै समय टिक्न सकेनन् । केही समय फोटोकपी र फ्याक्सको धन्दा चलाए । त्यसबाट पनि कुनै उन्नति गर्न सक्ने सम्भावना नदेखेर कम्युटर इन्स्िटच्युटतिर ढल्किए । यो पेशा पनि उनीहरूले दुई डेढ वर्षभन्दा बढी चलाउन सकेनन् । चारैतिरबाट असफल भएपछि उनीहरूको अगाडि अब केवल दुईवटा उपयुक्त पेशा बाँकी रहेका थिए- जग्गाको किनबेचको कारोबार वा विदेशी रोजगारको कारोबार तर यसमा पनि कमरेडहरू सफल भएनन् ।
घरमा खर्च बढ्दै गयो । मागहरू बढ्दै गए । आवश्यकता बढ्र्दै गए । यी सब कुराको साथसाथै ऋण पनि बढ्दै गयो । उद्योग धन्दा खोल्छु भनेर बैङ्कबाट ल्याएको कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था रहेन । सुकुम्बासीमा प्राप्त गरेको घर घडेरी विक्री गरे पनि ऋण बीसको उन्नाइस हुने छाँट देखिएन । कमरेड किशोर र कमरेड मालतीको पार्टी कामप्रति एक प्रकारको वितृष्णा लाग्न थाल्यो । उनीहरू बिस्तारबिस्तार निष्त्रिmय भएर बस्न थाले । वास्तवमा उनीहरू के गर्ने के नगर्ने भन्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए ।
कमरेड किशोर र कमरेड मालतीले के देखे भने क्रान्तिकारी स्पि्रट भएका धेरै जसो कमरेड माओवादी भइसकेका थिए । उनीहरूमध्ये कति भूमिगत भइसकेका थिए भने कति बाहिर एमालेजस्तै देखिएर माओवादी पार्टीका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका थिए । कमरेड किशोरको एक मनले त क्रान्ति नै गर्ने हो भने माओवादीमा जानुपर्छ कि पनि भनिरहेको थियो तर फेरि उनको अर्को मनले भनिरहेको थियो यो उमेरमा आएर माओवादीले जति बलिदानीको भावनाले काम गर्न सकिन्न । यो उमेरमा आएर माओवादीहरूले जति ज्यान नै फालेर काम गर्न सकिन्न ।
यसैबीच प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर एमाले सरकारमा गयो । एमालेको कृपादृष्टि कमरेड किशोरमाथि पनि पर्‍यो । उनलाई पार्टीले जी एम पदले सम्मानित गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
जिएम भएको एक/दुई वर्षमा नै कमरेड किशोरको पारिवारिक स्थितिमा ठूलो हेरफेर आयो । उनले राजधानीमा नै महल खडा गरेको खवरले समाचार पानाका पन्ना भरिन थाले । हुन त यसैबीच उनका जेठा छोरा कोरिया गएको एक/डेढ वर्ष जति भएको थियो । उनले आफूले राजधानीमा खडा गरेको भवन कुनै भ्रष्टाचारको पैसाले होइन । छोराले कोरियाबाट पठाएको पैसाले नै बनाएको हो भने । यो कुरा कतिले पत्ताए कतिले पत्ताएनन् तर साँचो कुरा के थियो भने यतिबेला कमरेड किशोर र कमरेड मालतीको अवस्था हिजोको जस्तो थिएन । उनीहरूको गणना राजधानीकै अभिजात वर्गमा हुन थालेको थियो ।
कमरेड मोहनको अगाडि एउटा पजेरो आएर रोकियो । पजेरो कमरेड किशोरको थियो । जिएम कमरेड किशोर ।
मलाई चिन्नु भयो मोहनजी ? कमरेड किशोरले गाडीबाट मुण्टो बाहिर निकालेर सोधे । आफ्नो अगाडि गाडी आएर रोकिादा कमरेड मोहन झस्किए । उनले देखे एक जना पेन्ट टाई सुट लगाएको व्यक्तिले उनलाई सम्बोधन गर्दै भनिरहेको थियो ।
उनले आँखा गाडेर हेर्दा चिनेजस्तो त लाग्यो तर ठहराउन भने सकेनन् । उनले विनम्रतापूर्वक भने- मैले तपाईर्ंलाई कतै देखेजस्तो त लाग्यो तर ठहराउन सकिनँ । आँखा कमजोर भएर पनि होला ।
म तपाईंको बनारसको लंगोटिया यार । कमरेड किशोर । कमरेड किशोरले मुस्कराउँदै भने ।
ए त्यसैले पो त मलाई तपाईं कुनै चिर परिचित व्यक्तिजस्तो लाग्नुभएको थियो । अहिले मलाई तपाईंलाई चिन्न गाह्रो भयो । हिजो किशोरजी वास्तवमा किशोर अवस्थामा नै हुनुहुन्थ्यो । अहिले यस्तो प्रौढ अवस्थामा मैले तपाईंलाई कसरी चिन्ने । दोस्रो कुरो तपाईं बनारसको धोती कुर्तामा हुनुहुन्थ्यो । अहिले यस्तो सुटेड बुटेड व्यक्तिलाई मैले कसरी चिन्ने ? उसरी तपाईर्ले मेरो कुनै खबर नलिए पनि तपाईंका बारेमा त मैले खबर लिादै गर्थैं । पछिल्लोपटक तपाईं जिएम भएको खबर पनि मेरा कानमा नपुगेको होइनन् । कमरेड मोहनले आफ्नो प्रतिक्रिया प्रकट गर्दै भने ।
भन्नोस् तपाईं अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ? केही गम्भीरजस्तो भएर कमरेड किशोरले प्रश्न गरे ।
के गर्ने गाउँमा मास्टरी गर्दै थिएँ । सरकारले मलाई आतङ्कवादी भनेर प्रहरी थाना पुरायो । सैनिक ब्यारेकमा पुरायो । जेलको दर्शन पनि गरायो । गायब नै पार्ने सुर पनि कसेको थियो तर नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी सङ्घ-संस्था र कानुन व्यवसायीहरूको ठूलो प्रयासले छुटेको छु । यसमा न्यायाधीशहरूको पनि निकै ठूलो सहयोग रहेको छ । थाना र ब्यारेकमा ज्यादा यातना खाएर होला मेरो सम्पूर्ण शरीर मरेको जस्तो छ । अहिले उपचार गराउँदै छु । उपचार गराउन नै राजधानी आएको थिएँ । भोलि जिल्ल्ाातिर नै फर्किंदै छु । कमरेड मोहनले सबै कुराको बेली विस्तार लगाउँदै भने ।
आज मेरै निवास जाने कि ? दुःख सुखका कुरा गर्न सकिन्छ । कमरेड किशोरले उदारताको प्रदर्शन गर्दै भने । जान त जान हुन्थ्यो तर केही काम बाँकी रहेकोले अहिलेलाई क्षमा गर्नु होला । पछि कुनै दिन तपाईंको निवासमा अवश्य निस्किउँला ।